Debian 8.0 "Jessie" ayaa ku raran doonta Linux 3.16 kernel | Laga soo bilaabo Linux
Dhanka kale buuqa iyo dulqaadka isticmaalayaasha daruuriyadan (marka lagu daro sii deynti hore ee Ubuntu 14.04 "Trusty Tahr"), Kooxda Debian ayaa ka dooday nooca nuxurka Linux waa in loo adeegsadaa bedelka nooca hadda jira Debian 7 Wheezy (kaas oo July ee la soo dhaafay 12 bilaabay cusboonaysiinta 7.6, markan oo diiradda la saarayo yutiilitiyada korantada).
Noocee noocee ah ayuu yeelan doonaa Debian Jessie?
Go’aanka ugu dambeeya wuxuu ahaa Debian 8.0 Jessie waxaa ku jiri doona firida markii ugu horreysa Linux 3.16, iyo sababta ugu weyn ee qaabkan loo doortay ayaa ah in la sii deyn doono bisha Agoosto. Intaas waxaa sii dheer, backport tijaabada ah ee Debian sii-deynta musharrixiinta sii-deynta ee Debian Jessie haddii ay dhacdo in qof walbaa doonayo inuu tijaabiyo. Baaqa lagu soo saaray barta Qaybaha ka yimid Debian, waxaa kale oo la ogaadey in baakadaha aan la jaan qaadi karin ay tahay in laga saaro keydka ka hor taariikhda qaboojinta, taas oo ah Nofeembar 5, 2014.
Kuwa horay u rakibay Debian Jessie, taas oo hadda ku jirta marxaladeeda tijaabada, kernel waa in lagu cusbooneysiiyaa a:
beddelaya nooca yar ee hadda jira (3.14).
Macluumaad dheeri ah, waxaa lagu sheegay in xarkaha jirku ay hayn doonaan Kooxda Ubuntu Kernel Team illaa qiyaastii Abriil 2016 maxaa yeelay ma ahan nooc ka tirsan laanta LTS, sida laga soo xigtay kernel.org.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee tan, waxaan kugu martiqaadayaa inaad gujiso xidhiidhkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Debian 8.0 "Jessie" ayaa ku raran doonta Linux 3.16 kernel
Hagaag, ma garanayo waxaan dhaho ... Waxaan u maleynayaa inaysan aheyn fikrad wanaagsan in la geliyo qolof aan aheyn LTS meel fog oo xasilloon, taas oo sidoo kale ay taageeri doonaan wiilasha Ubuntu (iyadoon ujeedku aheyn in laga xumaado Ubunteros) :(.
Isku mid halkan….
LTS lama siinayo ka dib marka si rasmi ah loo sii daayo? Qaybaha 3.10, 3.12 iyo 3.14 waa LTS, waxaan rajeynayaa inay tani sidoo kale tahay. Haddayna aakhirka noqonin LTS, waxaa laga yaabaa in Debian uu ka fekero beddelaadda, maadaama qaboojinta Jessie u malayn maayo inay gaaban tahay ...
PS: Hada adigu waxaad kusoo noqotey Slackware, waan ku sugeynaa, peter, 🙂.
Guud ahaan, waa la ogyahay ka hor intaan la sii deynin in iniinku muddo dheer sii jiri doono iyo in kale.Taasina waa sababta ragga reer Debian ahi ay horeba u ogaayeen in nooca 3.16 uusan noqon doonin LTS. Waa wax xiiso leh in ay doortaan kernelkan tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkan taageerada 3.4 LTS kernel ayaa dhammaatay oo waxaan ka ogahay in LTS cusub ay la imaan doonaan 3.18 kernel si sax ah Oktoobar :).
Marka laga hadlayo casharrada, waxaan horeyba u sameeyay mid ku saabsan Slackware saddex bilood ka hor: https://blog.desdelinux.net/despues-instalar-slackware/
Dib-u-eegistiisa xoogaa, waa yara dhacsan tahay marka la eego vlc, libreoffice iyo oracle jdk .. bogga:
Qaar ka mid ah LTS waxaan u maleynayaa in lagu dhawaaqay ka dib markii la sii daayay markaa. 3.12 ma noqon doonin waxaanan u maleynayaa in lagu dhawaaqay markii 3.13 mar hore soo baxday. Sikastaba, hadii 3.18 ay noqoneyso LTS oo ay tahay bisha Oktoobar, ma fahmin sababta aysan u dhigayn midkaas, ilaa ay Jessie leedahay qaboojiye kooban (oo aan ku celiyo, waxay umuuqataa in waqtiyada qabowgu sii weynaan doonaan uguna dambeeya) waxay ka badneyd 8 bilood).
Waanan ku faraxsanahay casharradan, laakiin waxaa jira waxyaabo ay adag tahay in lagu raaco Slackware. Tusaale ahaan, qaab dhismeed fara badan si loogu rakibo barnaamijyada 32-bit ah: waxa ka muuqda wiki waa geedi socod cadaab leh, oo leh nooc qoraal kama dambays ah oo la wado mar kasta oo aad rabto inaad wax ku rakibto 32-bit, aad bay iigu adag tahay. Ama sida loo sameeyo rakibid nadiif ah, iyada oo aan la helin xirmooyin aan loo baahnayn, tusaale ahaan taageerada alaabooyinka HP (midkood tusaale ahaan wuu heli karaa, laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo aan faa'iido lahayn oo uusan samayn, sida dhammaan kombuyuutarrada ay ku rakibto si aan caadi ahayn). Websaydhyada leh liistada ugu yar ee rakibidda ee 'Slackware' waxay ka yimaadeen noocyadii hore, ma arag mid ka mid ah 14.1. Anigu ma ihi rookie, laakiin noocan oo kale ah wuxuu i siiyaa ixtiraam badan ...
Hagaag, rakibayaasha Slackware waxay ku siinaysaa suurtagalnimada inaad samayso xulasho xirmooyin A, AP, D, F, K, L, N iyo X. Waxaad ku samayn kartaa tan adoo dooranaya halkii aad ka dooran lahayd "buuxa" xulashada "menu" xulasho » Tan tan waa inaad ku dartaa kooxda KDE iyo KDEI haddii aad rabto inaad KDE u hesho deegaan ahaan ama kooxda XAP haddii aad rabto inaad yeelato XFCE ama mid kale. Kooxda ciyaarta (Y) waan iska indha tirayaa. Marka kooxahaan la xusho, waxaad ku xulan doontaa xirmo xirmo kooxaha dhexdooda ah. Sida caadiga ah, ka tag dhammaan xirmooyinka kooxaha A, AP, D, F, K, L, N iyo X. Ku foog kooxda KDE, KDEI ama XAP oo halkan waa inaad doorataa midka aad rabto inaad rakibto ama aan ku qorneyn halkaas waa ciyaaro ama yutiilitirro badan oo aad sameyso ama aadan u baahnayn oo mid walba ku xiran yahay :).
Wixii ku saabsan multilib 64 bit Slackware ah oo fudud. Kaliya fur terminalka, gal asalka oo ku qor sidan:
lftp -c 'furan http://slackware.com/~alien/multilib/ ; muraayad 14.1 ′
upgradepkg –reinstall –install-cusub * .t? z
upgradepkg –in-cusub-slackware64-kompi32 / * - compel32 / *. t? z
Adigana marhore waad multilib 😀
Waa hagaag, iswaafajinta 32-bit waa mid aad muhiim u ah, barnaamijka 'Slackware wiki' howshu aad ayey uga dheer tahay. Waad ku mahadsantahay warbixinta!
Waad soo dhaweyneysa 😀
Marka loo eego ra'yi, oo ay i siiyeen, xaqiiqda ah inuu doortay Debian ayaa sabab u noqon karta iyaga inay ugu beddelaan LTS
3.14 kernel wuxuu ku fashilmay intel iris pro 5200 iyo processor-ka i7 4750HQ. Adeegso openSuSE 13.1. Waxaan joojiyay isticmaalka kernel tumbleweed, kuwa idinka mid ah oo aan garanaynin qaab ay ku xasiliyaan kernel-ka cusub ee OpenSUSE. Waxaan adeegsaday kernel tumbleweed tan iyo markii aan furaySUSE 12.3. Kernels 3.11, 3.13 si guul leh ayey ku baxeen.
Tusaale ahaan, processor-yada ku jira xaaladaha caadiga ah waxay u dhexeeyaan 0 - 5% (hadda oo leh chrome furan iyo 1 tabs 20%), kernel-kaasna waxaa lagu dejinayaa 1 - 5% iyadoon waxba la qaban. Waxaa ugu darnaa, qorista feylku ma ahayn mid lagu kalsoonaan karo. (oo leh 25 sidoo kale).
Waan ku daalay isku dayga iniinno cusub, laga yaabee hadda inay sii wanaajiyeen, laakiin dabcan intay taageerto kernel, ugu yaraan, waa su'aal haddii ay si sax ah u sameeyaan. Waxaan ku iibsaday kombuyuutar leh sawir gacmeedyo Intel ah (iyo awood badan) oo loogu talagalay taageerada wanaagsan ee teori ahaan.
Waxaan kaliya rajeynayaa in qeybinta ay tijaabiso jirkooda kumbuyuutaro sida aniga oo kale (clevo 740su), maxaa yeelay waxaan dareemayaa inaan yeelanayo sawiro ay dad aad u yar leeyihiin, xoogaa waa layga takooray.
Ku jawaab orbayo
Qalabka Debian ee ay hayaan Ubuntu Kernel Team? Waa kaftan, sax?
Waxyaabaha ku jira Debian-ka ayaa aad iyo aad u xiiso badan, SystemD, kernel aan ahayn LTS, doodo aan macno lahayn oo ku saabsan liiska Debian, si kastaba ha noqotee.
Had iyo jeer wadahadal, iyo in kasta oo ay wali tahay Debian, anigu kama walwalayo adiga.
Naaahh runtii kama walwalayo, Debian wuu sii joogi doonaa Debian ilaa iyo inta laga ixtiraamo DFSG. Faalladayda waxaa badiyaa lagu jiheeyey buuqii dhawaanahan ka dhex abuurmay (taas oo si gaar ah aan ugu arko hab wanaagsan, maadaama inbadan aaminsan yihiin in Debian dhintey), gaar ahaan mawduuca SystemD iyo hadda kernel ma ahan LTS, oo ay hayaan Kooxda Ubuntu Kernel.
Sikastaba, Debian waligeyba wuxuu ahaan doonaa distoorkeyga aan jeclahay, laakiin hada waxaan aruurinayaa Gentoodeyda cusub, waan arki doonaa hadii Gentoo ay i qabato ama aan kusoo laabto dhulalka xasiloonida Debian.
PD: Hadda waxaan adeegsanayaa PC-ga odaygeyga, kuwa ku shaqeynaya UA.
Ha ka welwelin UA trolls, way yar yihiin. Waxa aniga iga yaabiyay ayaa ah in ku dhawaaqida boga Debian-ka uu lahaa dhawaq (oo had iyo jeer lagu muujiyo hadalada Mark Shuttleworth 😛).
Marka laga hadlayo buuqa Debian, waxaan u maleynayaa inay fiicantahay, maadaama ayan mar dambe la dhajin doonin oo ay raaci doonaan isla wadadii Ubuntu LTS ama Slackware, taas oo isbadaleysa isla marka uu epic fashilmo sida Heartbleed oo ka socota OpenSSL ayaa muuqata, marka lagu daro ku hagaajiso otomaatiga casriyeynta si weyn iyada oo aan la baabi'in qaabab hore (ixtiraamka Debian).
Iyo sidoo kale, maadaama aad ka hadlayso Gentoo, ma waxaad dhigaysaa Yuno Gasai inuu noqdo asalka GRUB 😀?
Salaam saaxiib @ eliotime3000, ha xumaan, laakiin kooxda Slackware waxay isticmaashaa geel yar yar oo vanilj ah halka Ubuntu adeegsato kernel ay iyagu wax ka beddeleen .. Slackware-ka wax walba waa vanilji (mahadsanid wanaag 😀). Tani waa sababta aan aad uga shakisanahay dayactirka ay bixiso Ubuntu. Waa inaan sidoo kale idhaahdaa Debian weligay wax shil ah ama argagax ahi kuma dhicin halka Ubuntu wax ka badan hal jeer :). Marka laga reebo xaqiiqda ah in ka badan hal jeer oo aan arkay nidaamka oo dhan oo jabinaya xitaa Ubuntu LTS cusbooneysiin darteed .. Taasi Debian illaa iyo hadda ma dhicin .. Waxaan u maleynayaa in kooxda Debian ay tahay inay yareeyaan waxqabadka Ubuntu ee Debian .. Waxaan Horay u aragtay kala duwanaanshaha tayada ee udhaxeeya Debian Squeeze iyo Wheezy sababtoo ah booska kooxda Ubuntu ee Debian Waan hubaa in ujeedada kooxda Ubuntu ay tahay in la baabi'iyo Debian maadaama ay horeyba u haysatay waxay awood u leedahay inay ilaaliso diirkeeda adigoon ku tiirsaneyn baakadaha Debian iyo Ubuntu inta badan ma waafaqsana kuwa Debian.
Salaan iyo fadlan, ra'yigan waa la faafiyey iyada oo aan loogu talagalin in lagu qasbo: D.
Unugga uu ilaaliyo Ubuntu waa wax yar oo la yaab leh runtuna ma aha wax lagu qoslo, gaar ahaan marka Ubuntu ay gacmahooda ku soo saaraan kernel-ka Debian.
Haah haa @ eliotime3000 waxaan Yuno dhigi doonaa Yuno-ga aan jeclahay asal ahaan asal ahaan GRUB 😀
Dhib malahan waxaad tiri, @petercheco. Wax lagu qoslo Debian waxay isticmaashaa nooc ka mid ah kernel-ka Linux taas oo ay inta badan u egtahay Linux-libre (taas oo ah sababta blobbooyin si gooni ah loogu rakibay iyadoo lagu saleynayo qalabka gaarka loo leeyahay), sidaa darteed Ubuntu waa inay ku tiirsanaato sii deynta Debian si ay ugu haboonaato baahideeda (sababta ugu weyn ee kernel-argagaxa), in kasta oo lagu dhawaaqayo Debian ku saabsan isticmaalka kernel Ubuntu waa suurtagal laakiin maahan xaqiijin.
Iyo sida haddii aysan taasi ku filneyn, Ubuntu waxay ku qasbanaan laheyd inay isticmaasho linux-libre kernel haddii ay rabto inay ilaaliso distoorkii ku quudinayay tan iyo 2004, marka lagu daro taas, go'aankaan ma waxyeeleyneyso xasiloonida Debian, maadaama ay isticmaali laheyd iniin yar oo lagu dayactiray dammaanad qaadka FSF ee ka madax bannaan cayayaanka sababa argagaxa kernel.
Xilligan la joogo, waa jaangooyooyin lagu bixiyo baloogga.
Haddii lagu daabici lahaa qaybta "wararka" ama "ogeysiisyada" ee bogga rasmiga ah, markaa waxay noqoneysaa mid aan laga soo kaban karin. Ugu badnaan, waxay ahayd mala-awaal inaysan ahayn inay ka soo baxdo 4-ta gidaar ee kooxda Debian, maadaama aan lagu daabicin liiska dirista.
Haatan waxaan ku raaxeysanayaa Debian Jessie ka dib markii aan la dagaallamay. QTCurve gudaha KDE 4.8 oo ku xigta kernel 3.14 (sababta oo ah dhabarka dambe, dabcan) Debian Wheezy, iyo waxa ugu qosolka badan ayaa ah in Jessie, waxaad arki kartaa inay jirto waxqabad dhab ah oo nooca nuuga ah.
Hase yeeshe, Debian Jessie ayaa igaga tagtay dhadhan fiican oo afkayga ku saabsan xasilloonida waalida ah ee ka dhanka ah SystemD iyo XFCE iyada oo jawiga desktop-ka ee caadiga ah (GNOME uu yahay mid ikhtiyaari ah oo ku xidhan hadba kii ugu horreeyay iyo kii ugu dambeeyay ee aan isku dayo rakibayaasha Debian Jessie), iyo intaas Hadda way soo xaadireen, ka dib markii ay ka gaabisay cusbooneysiinta 'Squeeze' iyo sii wadida Wheezy ee laanta ESR ee Iceweasel, hadda waxay u muuqataa in qaybta soo socota, ugu dambeyntii laanta la sii daayo ay soo laaban doonto (in kasta oo aysan la jaan qaadin dhabarka dambe ka yimid Debian Mozilla, haddiiba ay dhacdo).
Qiyaas kale oo ah in qoraalkan 'Debian blog post' uu soo saaray ayaa ahaa, markii ugu horreysay, Debian wuxuu la jaanqaadi doonaa qaabka loo cusbooneysiiyo cusbooneysiinta daabacaadda LTS ee Ubuntu.
Weli, tani waa markii ugu horreysay ee aan ku dhex milmo laanta baaritaanka Debian, oo waxaan dhihi karaa, way ka xasilloon tahay Ubuntu. Aynu eegno haddii waqtiga qaboojinta laanta, ay ugu dambeyntii maareeyaan inay dhigaan Xarunta Software-ka sida Wheezy iyo Tuujinta.
Xirfadeyda lama cusbooneysiin waxaanan joogaa Jessie.
[…] Warbixinta tijaabada ah ee Debian Siidaynta nuqulada Musharaxiinta hadda waa diyaar Debian Jessie haddii ay dhacdo inuu qof walba doonayo inuu isku dayo. […]
Nooca non-LTS ee ay hayaan Ubuntu folks? runtii waa go'aan "lama filaan ah"
Ku jawaab Charles White
Tani waa mala-awaal ka yimid kooxda Debian. Ugu badnaan, haddii kernelku ku soo baxo nooca 'LTS', waxay ku xaqiijin lahaayeen qaybta wararka ee goobta.
Uma maleynayo inay barafoobi doonto nooca aan ku sii wadi doono tijaabinta waa laan xasiloon inkasta oo magacu jiro
Waxaan aaminsanahay dhibaatooyinkii i soo maray
markaa wax badan kama walwalayo
Waxaan kaliya ka xumaaday gnome 3 iyo deganaanshihiisa liidata
kde, xfce iyo asxaabtiisuba waa miisaska kumbuyuutar ee aan tijaabiyey kuna xasillan baaritaanka debianka
Waxaan isticmaalayaa Imtixaanka Debian hadda, XFCE-na way ka xasilloon tahay baaritaanka marka loo eego mid deggan.
"... oo diirada saaraya wakaaladaha adeega server markan)."
Ugudambeyntii, waxaan u maleynayaa in Debian uu ku dambeyn doono inuu noqdo kaliya server-… Waxaan arkaa, in aan ka xumahay, in kooxda horumarinta Debian ay had iyo jeer ka baxaan isticmaalaha desktop-ka. xD
Hagaag, dhaqankaas Debian-ka ah waa mid caan ku ah dhammaan noocyada (Waxaan gartay isla marka uu Debian Lenny Update 6 soo baxo), isla sidaasna waa inay ku dhacdaa noocyada soo socda ee Debian-ka ah.
Waad ku mahadsantahay warka 😀
Debian-kan maadaama ay gaabis yihiin, kuwa kale waxay cunayaan keegga la yiraahdo ubuntu, opensuse, fedora. Waa inay ahaadaan kuwo dhakhso badan, maxaa yeelay xitaa tijaabinta qalabka loo yaqaan 'distro' iyo goorta ay si rasmi ah u soo baxdo goor dambe, khaladaad badan ayaa soo baxa oo aad u badan oo ay tahay inay yeeshaan 7 waxayna ku socotaa 7.6
Ku jawaab debian
Aad baan uga samrayaa sii deynta qaybintaan !!!! Ma sugi karo inaan ku rakibo nooca xasilloon ee leh lxde on my xD netbook ee liita, shit shit shit 30 maalmood !!! 30 maalmood ayaa hadhay xD
Abuuritaanka barnaamij Ubuntu Taabasho [QML] - [Qaybta 3]